Mwakpo mberede na China na Russia wakporo Hawaii, ọgba aghara dị na Eswatini ga-ede Taiwan na ya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi China » Mwakpo mberede na China na Russia wakporo Hawaii, ọgba aghara dị na Eswatini ga-ede Taiwan na ya
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • Eswatini Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ na -agbasa Russia • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Okwu Russia Nuclear
Nkwupụta nke China na Taiwan dị ka iyi egwu zuru ụwa ọnụ. Ndị agha na-eme 200 kilomita n'akụkụ ụsọ oké osimiri Hawaii, onye ọrụ gọọmentị Japan na-adọ US aka na ntị nke mbuso agha nke China na Russia, ịnwale ịkwatu gọọmentị na Alaeze Eswatini, nwere ike inwe nnukwu njikọ.
Ndi Hawaii na-eyi egwu site na mbuso agha mberede nke Russia na China nwere na Taiwan?
Ala eze Eswatini nọ n'ọgba aghara mgbe igwe mmadụ dị iche iche nke mba ofesi na-achọ ịkwatu ọchịchị ya. Nke a nwekwara ike ịbụ ihe metụtara esemokwu China-Taiwan
United States anọgidewo na-enwe mmekọrịta enyi ma nye ngwa agha iji nyere Taiwan aka. Eswatini bụ naanị mba Africa nke nwere mmekọrịta mmekọrịta mba na Taiwan. Ka a sịkwa ihe mere US ji wuo nnukwu ụlọ ọrụ nnọchi anya mba ndị dị na obere ala nke ihe na-erughị nde mmadụ 2.
Naanị izu abụọ gara aga Ragbọ elu ndị agha US Raptor aghaghị ịmalite ịchịkwa mmega ahụ nke Russia na mmiri dị nso na US Pacific State of Hawaii.
“Anyi aghaghi igosiputa igbochi China, ma obughi nani China kamakwa ndi Russia, n'ihi na dika m gwara gi, na ha na eme ihe omume ha onu,” onye osote Mịnịsta na nchekwa Japan Yasuhide Nakayama tochie na Hudson Institute izu a.
Ọ bụrụ na ị lee akụkọ sitere na Zvezda, nke bụ akụkọ Russia, akụkọ sitere n'aka ndị agha Russia, ha na-emega ahụ ugbu a n'ihu Honolulu.
E nwekwara ụgbọ agha, okpuru mmiri nuklia na nnukwu ụgbọ elu. Ha na-emega ahụ n'ihu ihu n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Honolulu.
Achọghị m ichetara afọ 70 gara aga Pearl Harbor wakporo na mberede. Anyị ga-akpachara anya maka ọrụ ọzụzụ ndị agha dị otú a nke ndị Russia.
Ọ bụghị ihe mberede, ndị Russia họọrọ ebe ahụ, n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Honolulu, Hawaii. Na Hawaii, enwere ụgbọ mmiri ndị US nke asaa yana PACOM nọ n'isi ya na Hawaii.
Gbọ mmiri spy Russia rudoro na mgbago ugwu Oahu, Hawaii, dị ka otu akụkọ sitere na akwụkwọ a.
White House, gọọmentị United States kwukwara okwu banyere Hong Kong.
Ọnọdụ Taiwan nwere ike mbuso agha site na mpaghara China abụrụla ọrụ nke ndị Indo-Pacific strategists na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ebe ndị agha Kọmunist nke China na-abawanye agha ndị agha ha na agwaetiti ahụ. Nakayama, onye kwuputara n'ezoghị ọnụ banyere mkpa ọ dị maka mba ndị kwuo uche ya iji hụ na ndụ Taiwan dị ndụ, gosipụtara na Russia na China na-arụ ọrụ dịka ndị mmekọ na-akwadebe maka nnukwu esemokwu na United States.
Ndị Taiwanese na-emekọ ọnụ. Ha na-elekwasị anya na nnukwu mba abụọ na-emekọ ihe ọnụ ma na-atụ ọtụtụ egwu megide Taiwan. ”
Ndị ọrụ ọchịchị Kọmunist nke China na-ahụ Taiwan dị ka mpaghara nnupụisi, nke ha kwuru kemgbe ha batara n'ọchịchị na 1949 mana ha anaghị achịkwa. Ọtụtụ mba na-amata ọchịchị dị na Beijing dị ka gọọmentị gọọmentị China na enweghị mmekọrịta mmekọrịta mba na Taiwan, n'agbanyeghị na US ejigide mmekọrịta enyi na enyi ma nyekwa ngwa ọgụ iji nyere ndị ọchịchị Taiwan aka igbochi mwakpo sitere na ala.
"Anyị ga-echebe Taiwan dị ka mba onye kwuo uche ya," onye osote onye na-ahụ maka nchekwa Japan Nakayama.
Nke a nwere ike ịbụ kpọmkwem ihe kpatara na n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa, na obere Alaeze Eswatini nwere nde mmadụ 1.3, US nwere otu n'ime ndị nnọchi anya mba kachasị ukwuu n'ụwa.
Eswatini bụ naanị mba dị n’Africa na-anabata Taiwan dị ka obodo. United States yiri ka ọ nwere mmasị na ọnọdụ a. China na-ewe iwe ma eleghị anya na-akpata ọgba aghara ugbu a na mbọ a na-agba na Eswatini. Onye bụbu Mịnịsta Ofesi na ZImbabwe, Walter Mzembi nyere ihe ndabere banyere eTurboNews n'izu a n'isiokwu isiokwu ya: Eswatini jidere n'etiti China na Taiwan.
Onye ọnụ na-ekwuchitere Mịnịsta Ofesi nke China Wang Wenbine kọwara okwu Japan maka mwakpo enwere ike ịlụ na Hawaii dị oke egwu ma were iwe na Japan ịkpọ Taiwan mba. O kwuru, sị: “Anyị na-arịọ Japan ka o mee ka o doo anya na Taiwan abụghị mba, hụkwa na ụdị ihe ahụ agaghị eme ọzọ.”
Nakayama kwusiri ike na esemokwu dị na mpaghara Indo-Pacific nwere njikọ kpọmkwem na nchekwa ndị America, ọkachasị na njikọta n'etiti China na Russia. O mere ka isi okwu ahụ pụta site n'ichetara mwakpo ndị Japan na mberede na Pearl Harbor afọ 70 gara aga, nke kpasuru ndị agha US na Agha Secondwa nke Abụọ.
Ndị ọrụ Russia kọwara na "mgbọ ogbunigwe ha na ogbunigwe" na Pacific dị ka nlele akụrụngwa. Maka Nakayama, ọrụ ndị dị otú a na-eme ka o doo anya na Japan na US nwere nsogbu nkịtị ọ dị mkpa ka ha jikọtara ọnụ.
Ndị isi US na ndị Japan kwuru na ha ga-akwalite akụrụngwa ha iji merie egwu sitere na China na North Korea, gụnyere ike iwe iwe nke Beijing na Taiwan, ka gọọmentị Biden na-anwa ịtọlite ​​mpaghara ahụ.